N'ileghachi anya ịchọta ihe mfe ụzọ jikwaa gị music faịlụ? Ọtụtụ n'ime anyị music echekwara anyị desktọọpụ ma ọ bụ na laptọọpụ na-esiri ike categorize ha. Ọ dị mfe ịghọta nsogbu - anyị nwere ike na-echekwa music faịlụ dị iche iche nchekwa. E nwere ike ịbụ mbiputegharị nke ọtụtụ music faịlụ. Plus, ị ga-ahụ ya ọtụtụ siri ike categorize music ma ọ bụrụ na ọ bụ unorganized.
Nke a bụ ya mere otu audio mkpado nchịkọta akụkọ aka.
Tag nchịkọta akụkọ software bụ oké ụzọ jikwaa music faịlụ. Ọfọn-akpado collection na-enye gị haziri ahazi ọdọ mmiri na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọ. Ya mere, nke bụ ihe kasị mma software na-enyere gị ịkpado gị music collection?
TuneUp bụ a bara uru tinye-na na maka iTunes. TuneUp dị mfe iji na-ebu nnukwu nchekwa data nke fingerprints mee ka gị na music nhicha nnọọ mfe. Ya free version dị ụkọ na ị nwere ike ijikwa ole na ole songs. Full version bụ na-akparaghị ókè na-enye gị zuru ezu atụmatụ. Ọ na-enyocha gburugburu 2000 tracks nkeji ole na ole, nke bụ ngwa ngwa. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma Audio mkpado editọ si n'ebe ọ na-adịghị ihe o mere ma ị na-eji Mac ma ọ bụ Windows, ị na-n'aka na hụ ya n'anya.
Nkwado: Windows na Mac Rating: 3.5 / 5
- Simple Dọrọ na dobe atụmatụ
- Nnukwu nchekwa data nke now fingerprints gburugburu 90 nde.
- Interface bụ akụkụ nke iTunes
- na-arọ sized Ọbá akwụkwọ, e nwere nsogbu nke okuku ma Mmepe na-na-elekọta ya.
- Fọdụrụ kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ mmiri n'azụ iTunes kama oghere na ya. Ọ bụ ihe ọkpụrụkpụ ma ị pụrụ nnọọ họọrọ ya ma ọ bụghị.
2. Media Moneky
Ọ bụ ọzọ ka iTunes ma ọ bụrụ na-amasị gị ịkpọọ egwu na Windows usoro. Mgbe importing na music collection n'ime Media enwe, ị nwere ike imelite gị na mkpado na ala site na isi mmalite dị ka Freedb na Amazon. Ọ bụrụ na ị nwere na-ezughị ezu ma ọ bụ na-ekwesịghị ịdị, ID3 mkpado ya gosiri ha na-akpaghị aka na notifies gị.
Ahịa: $49.95 maka ndụ License.
Nkwado: Windows OS Rating: 4/5
- Ọ na-akpaghị aka flags rụrụ arụ ma ọ bụ mismatch ID3.
- Ọ na-akpaghị aka na-ahazi ndị music na nchekwa dabere na ID3.
- N'ihi na ndị na-achọ ọcha ọkọlọtọ, free version na-ọma onwem na.
- Ọ bụ nanị n'ihi Windows sistemụ na-arụ ọrụ onwe ha nke music egwuregwu.
- Ahịa dị elu karịa ndị ọzọ.
3. ID3 TagIT
Ọ nwere obosara mgbasa ọrụ isi ebe ya ntọhapụ. E nwere ọtụtụ akpaghị aka usoro mmasị na ya site na-enye gị a miri emi achịkwa gị geo mkpa. Ọ na-eji Freedb ka ịgbakwunye ọmụma gị faịlụ. Ị na-ngwa ngwa edit igbe bụrụ na ị chọrọ dezie ya ngwa ngwa.
Nkwado: Windows Rating: 4/5
- Na-enye gị oké akara ke nkpado ị faịlụ na nkeji nkọwa.
- Ọ bụ kpam kpam free.
- Quick edit nhọrọ ma ọ bụrụ enweghị mmasị aguliteghi mkpado.
- Development e kwụsịrị N'ihi ya dịghị ihe ọzọ mmelite na-atụ anya.
- E nweghị online enyemaka, n'ihi ya unu nwere ike igwu site iji nweta kpọgidere nke software.
MusicBrainz Picard 4
MusicBrainz nwere njirimara nọgidere na-enwe metadatabase. Na mgbakwunye na-eji dị ọmụma nke a faịlụ, ọ na-eji Na Na fingerprintings. Picard ka Mmepụta nwere eji ukwuu mepụtara geo ngwá ọrụ, nke nwere niile ọhụrụ atụmatụ na ike scanning. Ọ bụ oghe isi, n'ihi ya i nwere ike tweak ya dị ka gị mkpa.
Nkwado: Windows, Mac na Linux os. Rating: 4/5
- Ọ bụ oghe isi na ya mere mgbe nile mmelite na-tọhapụrụ.
- Akpaka scanning na ikpuru-dobe atụmatụ.
- Dị ka ọrụ ịnọgide na-enwe nchekwa data, ọ bụ obosara nchekwa data, nke mgbe niile Nwela emelitere.
- Dị ka ọrụ tinye ozi, ọmụma nwere ike ịbụ etịbe mgbe ụfọdụ.
- Ịgụ isiokwu nwere ike inwe ngwa ngwa na nnukwu n'ọbá akwụkwọ.
MP3 geo ngwá ọrụ nwere kensinammuo interface na-eme ka ihe nile dị mfe. Eji ngwá ọrụ a, ị nwere ike idezi gị MP3 mkpado yana kpọmkwem na mkpado. Ọ bụrụ na ị nwere faịlụ aha nke na-eji dị iche iche ọmụma na aha, ị nwere ike igosi na akakabarede n'ime n'ezie na mkpado.
Nkwado: Windows na Mac OS. Rating: 3.5 / 5
- kensinammuo interface na ojiji ọdụ data si Freedb, Amazon, Discogs wdg
- Ịnwere ike kwado na mkpado izere nsogbu dị ka mkpado ure wdg
- Expression dabeere renaming na-ekwe ka reformatting nke ị faịlụ akpọ ekwekọghị.
- Anya obere oge ochie ndị ọzọ dị ka otutu ọrụ a na-eme aka.
- Chọrọ ka ị ibudata, a Downloader ibudata na ịwụnye a software, ọbụna mgbe ya size bụ nanị 3 MB.
Ọ bụ ezie na Foobar200 bụ music ọkpụkpọ ma ọ na-enye gị oké mma ịkpado edezi nhọrọ. Ị nwere ike idozi mkpado mbipụta ọbụna na-egwu egwu a music, ihe i nwere ike ime na ọtụtụ ndị ọzọ na geo ngwaọrụ. Ọ na-enye gị siri ike, na akpaghị aka scanning nhọrọ. E nwere ọtụtụ customizations si dị iche iche ọrụ na otú ị na-na na nhọrọ aplenty.
Ahịa: Ọ bụ free download
Nkwado: Windows XP na n'elu Rating: 4/5
- Ọ bụ music ọkpụkpọ na-enye gị edezi ikike.
- Great customization nhọrọ tụnyere ndị ọzọ software-eme ka ọ anya ọma.
- Eji Freedb mekọrịta ihe ọmụma nke na mkpado, nke bụ a pụrụ ịdabere na isi iyi.
- dị ka ọ bụ ọkpụkpọ na onwe ya n'adịghị ka ụfọdụ nke ọzọ audio mkpado nchịkọta akụkọ software, mkpado edezi adịghị arụ ọrụ na ndị ọzọ music egwuregwu.
- Ụfọdụ customizations nwere ike egbochi arụmọrụ nke software, na mkpa ka ị kpachara anya mgbe na-eme na mgbanwe.
Tupu nbudata software, biko gaa na saịtị na-aga site akwụkwọ ntuziaka na nduzi. Lelee ahịa ka ha na-na-agbanwe agbanwe na ọhụrụ mmelite.
Olee otú Download Soundcloud Songs on iPhone
Atụmatụ maka Apple Music Ndenye aha
Na-ege ntị Spotify Music Free Via Spotify 3 Ọnwa ole na Free
10 French-arọ na ha Famous Oge gboo Music
Olee otú ịchọta oyiri Music Files na Wepụ
Olee otú Download CD 102,5 Music
> Resource> Music> The Best 6 Audio Tag Editor Software E Nwere Taa